एकै पटक १०० जनामा कोरोना संक्रमण देखिए के गर्ने ? - મોજીલું ગુજરાત
संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिरहँदा नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका सन्दर्भमा के कस्तो तयारी गरिरहेको छ भन्ने जानकारी सदनलाई गराउनुपर्‍यो, नागरिक सूचित हुनुपर्‍यो भन्ने थियो । म र मेरो टिमले नेपालले गरिरहेको र बाहिर भइरहेका प्रयासबारे बुझ्यौं र सार्वजनिक महत्वको भने पनि संकल्प प्रस्तावको ढाँचामा संसदमा प्रस्ताव लग्यौं । किनभने हामीले सरकारलाई प्रश्न वा गुनासो गर्नेभन्दा पनि हामी सबै सरकारको नेतृत्वमा काम गर्न एक ठाउँमा छौं भन्ने सन्देश दिन चाहेका थियौँ । र, सरकारले गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त नै तयार गरेर प्रस्तावमा राख्यौं ।
छलफलका क्रममा सिंगो संसद प्रस्तावको पक्षमा उभियो र हामी सरकारको साथमा छौं भन्यो । जवाफ दिने क्रममा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि सकारात्मक रुपमा लिएर प्रस्तावले उठाएका मुख्य विषयहरुलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएर तत्काल ‘एक्सन’मा जान्छौं भन्नुभयो । कसैले बेसार, लसुन खाऊ ठीक हुन्छ भनेको छ, कसैले बोझो खाऊ भनेको छ । यस्तो बेला सरकारले जनतालाई भयभीत तुल्याउनु हुँदैन, सही सूचना दिन सक्नुपर्छ ।
संसदमा बहस गर्दैगर्दा हाम्रो मुख्य माग थियो– मन्त्रालयहरुले छुट्टाछुट्टै गर्ने काम होइन । संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार सबै एक ठाउँमा आएर उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको समितिमार्फत एकीकृत रुपमा काम गर्नुपर्छ । त्यो समिति शीर्ष निकाय जस्तो होस् । त्यसले एकीकृत कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । कसले, के गर्ने भन्ने परिभाषित गर्नुपर्छ । सबैले कार्ययोजना पालना गर्नुपर्छ । र, स्रोत व्यवस्थापन पनि त्यसरी नै हुनुपर्छ ।
तर अहिले पनि शिक्षामन्त्रालय बोलिरहेको छ, गृह मन्त्रालय बोलिरहेको छ, नागरिक उड्डययन प्राधिकरण बोलिरहेको छ । सबै आआफ्नो कुरा गरिरहेका छन् । हामीले खोजेको यो होइन, युद्धको बेलामा जस्तो शीर्ष निकायबाट काम होस् भन्ने हो । त्यसको बैठक कम्तीमा २४ वा ४८ घण्टामा बसोस्, सचिवालय होस् र सबै सूचना त्यहीमार्फत आओस् भन्ने हाम्रो पहिलो माग थियो । दोस्रो, हामी सबैको चाहना कोरोना भाइरस नेपाल भित्रनै नपाओस् भन्ने हो ।
त्यसका लागि भुटानसहित केही देशले अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन पुरै बन्द गरे । थुप्रै देशले संक्रमण धेरै फैलिएको देशबाट आउनेलाई पुरै रोक नलगाए पनि क्वारेन्टाइन अनिवार्य गरेका छन् । केहीले आवागमन बन्द गरेनन्, क्वारेन्टाइनमा पनि राखेनन्, तर संक्रमण नभएको प्रमाणपत्र लिएर आऊ भन्यो । नेपालले पनि यो तेस्रो बाटो अवलम्बन गरेको छ । तर हामीकहाँ उडान रोक्नुपर्ने नदेखिएको भनेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरु बोलिरहेको सुन्छौं । कोरोना संक्रमण भित्रिन नदिन उडान बन्द गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर नागरिक उड्डयनले भन्ने होइन, जनस्वास्थ्यका विज्ञहरुले भन्ने हो । नेपालको ‘हेल्थ सिस्टम’को आँखाबाट हेर्ने हो ।
म पब्लिक हेल्थ विज्ञ होइन, तर व्यक्तिगत रुपमा केही दिन नेपालले यो जोखिम पनि उठाउनुपर्छ भन्ने ठान्दछु । कि आवागमन बन्द गर्नुपर्छ कि संक्रमण फैलिएको देशबाट आउनेहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ । यसबारे उपपधानमन्त्री नेतृत्वको संयन्त्रले जनस्वास्थ्यका विज्ञहरुको राय सल्लाह लिएर निर्णय गरोस् । तेस्रो, कोरोनाको संक्रमण धेरै देखिएका देशहरुबाट आएकाहरुलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ज्वरो नापेर प्रवेश दिइन्छ । उहाँहरु अहिले कहाँ बसिरहनुभएको छ, के गरिरहनुभएको छ ? उहाँहरुमध्ये कुनै एक जनामा मात्र पनि कोरोना संक्रमण रहेछ भने त्यसको परिणाम के होला ? एक पटक कल्पना गरौं त ।